swe htwe December 6, 2012 - 5:15 pm To be no U-turn,we allare responsible. President,hluttaw chairpersons,Daw su and civil societies will solve this problem. Be healthy and wealthy myanmar !!!
Reply Aung Khin December 7, 2012 - 12:21 am It is right to control the writing theirselves.
Reply အောင်တင် December 7, 2012 - 2:38 am ရခိုင်အရေးအခင်းတုန်းကလို ချာနယ်တွေက မီးလောင်ရာ ဓါတ်ဆီလောင်း၊ မီးမလောင်သေးရင် လောင်စာချ မလုပ်ကြတော့ဘူးဆိုလို့ ဝမ်းသာမိပါတယ်။
Reply မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ December 7, 2012 - 3:43 am ‘ရန်ကုန်သို့ ရောက်ရှိနေသော BBC သတင်းဌာန၏ မြန်မာပိုင်း အယ်ဒီတာ ကိုစိုးဝင်းသန်းက’ – ဆိုတော့ နိုင်ငံခြား အခြေချပေါ့။ သဘောကတော့ မြန်မာပြည်ဖွားပေမယ့် အင်္ဂလိပ် ပါ့စ်ပို့ ကိုင်ထားတာလား။ သည်လိုဆိုရင် ရှင်က ပြောအားရှိတာပေါ့။ အင်္ဂလန်မှာက သတင်း လွတ်လပ်ခွင့်ရှိတယ်။ ဘုရင်မနဲ့ မိသားစုကို အပုတ်ချ တိုက်ခိုက်တာ မဟုတ်ရင် ကြိုက်တာ အမှန်ရေး၊ အလွန်ဆုံး ဖြစ် တရားစွဲ ခံရယုံပဲ။ ဒါတောင် ကိုယ့်မှာ ပိုက်ဆံရှိမှ တဘက်က တရားစွဲမှာ။ လမ်းဘေးနေတဲ့ အိမ်ခြေမဲ့ဆို ကိုယ့်ကို ကလောဆဲသွားလဲ ခံလိုက်ရုံပဲ။ ပိုက်ဆံမရှိသူ တရားသွားစွဲလို့ ကိုယ်ပဲ ရှေ့နေဘိုး၊ ရုံးကြေး ကုန်မယ်။ အခု မြန်မာပြည်မှာ ပြောင်းလဲ လာနေပါပြီဆိုပေမယ့် ဥပဒေတို့ အာဏာတို့ တရားစီရင်ချက်တို့ ဆိုတာ သူတို့ သေနပ်ပြောင်းဝက လာတာ။ ပြည်တွင်းကလူတွေ တချက်မှားတာနဲ့ ဦးသိန်းစိန် မညှာရင် ထောင်ထဲ ကားကနဲ ရောက်မှာ။ ၂၀၀၇ တုန်းက ၆၅ နှစ်တွေချတော့ သည်တခါ အနည်းဆုံး ၇၅ နှစ်နဲ့ အထက်ပဲ နေမှာ။ BBC အယ်ဒီတာကြီးကတော့ ရေးချင်တာ ရေး၊ ပြောချင်တာ ပြော၊ အဖမ်းခံရလဲ ကိုညီညီအောင်တို့ ယက်တောတို့လို အလွန်ဆုံး လပိုင်းပါပဲ။ သံရုံးက လိုက်ရွေးပြီး ဗမာပြည်ကို ဘိုင့်ဘိုင် လုပ်၊ အင်္ဂလန်ကို ဘင်သံလေးနဲ့ ပြန်လာရုံပေါ့ နော့။ ဒါလေးများ ပျင်းတောင် ပျင်းသေး ….. ။
Reply သာကီသွေး December 7, 2012 - 1:43 pm သတင်းဟာ